हकको आँखा microcrystalline क्वार्ट्जको एक निलो अस्पष्ट विविधता हो - भिडियो
ट्याग निलो हज आँखा, हकको आँखा
हकको आँखा निलो अपारदर्शी ढु stone्गा हो जुन माइक्रोक्रिस्टललाइन क्वार्ट्जबाट निर्मित हुन्छ।
हाम्रो पसलमा प्राकृतिक बाजको आँखा किन्नुहोस्
एक गाढा निलो अपारदर्शी रत्न विभिन्न प्रकारको microcrystalline क्वार्ट्ज। यो एक खनिज हो जुन समयको साथ अर्को खनिजमा परिवर्तन हुन्छ। यो पहिले क्रोसिडोलाईट थियो र पछि "फोसिलाइज" क्वार्ट्जमा गरियो। क्रोसिडोलाईट एक रेशेय निलो खनिज हो जो एम्फीबोल सिलिकेटको रिबेकिट परिवारसँग सम्बन्धित छ। क्वार्ट्ज बिस्तारै क्रसिडोलाईटको फाइबरको बीचमा इम्बेड हुने बित्तिकै ढु stone्गाको परिवर्तन सुरु हुन्छ।
यो रत्न यसको चटयोन्सीका लागि प्रख्यात छ। यो बाजाको आँखा जस्तो देखिन्छ। यो सम्बन्धित छ बाघको आँखा र pietersite, दुबै दुबै समान चटयोन्सी प्रदर्शन गर्दछ। टाइगरको आँखा वास्तवमा उच्च फलाम सामग्रीसँग समान बनाइएको हुन्छ।
कट, उपचार र अनुकरण
निलो बाजको आँखा रत्नहरू सामान्यतया उपचार नगरिएका हुन्छन् र कुनै पनि हिसाबले बढाइएको हुँदैन।
जेम्सले प्राय: क्याबोच्युन काट दिएका छन् उनीहरूको च्याटान्सन्स राम्रो प्रदर्शन गर्न। रातो तापक्रमको उपचार गरी रातो ढुङ्गा विकसित गरिन्छ। गहिरो पत्थर कृत्रिम रूप देखि एक नाइट्रिक एसिड उपचार को उपयोग गरेर रंग को बेहतर बनाउन को लागि हल्का।
कृत्रिम फाइबर अप्टिक गिलास बाघको आँखाको सामान्य अनुकरण हो, र र colorsहरूको एक विस्तृत श्रृंखलामा उत्पादन गरिन्छ। टाइगरको आँखा मुख्य रूपले दक्षिण अफ्रिका र पूर्वी एशियाबाट आउँदछ।
एक microcrystalline क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्वार्ट्जको एक समुच्चय मात्र उच्च म्याग्निफिकेसन अन्तर्गत दृश्यमान छ। क्रिप्टो क्रिस्टलीय प्रजाति या त पारदर्शी वा प्रायः अस्पष्ट हुन्छन्, जबकि पारदर्शी प्रजातिहरू म्याक्रोक्राइस्टलाइनजस्तो हुन्छ। चलिसेडोनी सिलिकाको क्रिप्टो क्रिस्टललाइन रूप हो जुन दुबै क्वार्ट्जको मिल्दा इंटरग्रोथहरू समावेश गर्दछ, र यसको मोनोक्लिनिक पोलिमोर्फ मोगानाइट। क्वार्ट्जका अन्य अपारदर्शी रत्न प्रजातिहरू, वा क्वार्ट्ज सहित मिश्रित चट्टानहरू, प्राय: विपरित ब्यान्डहरू र र colorको ढाँचाहरू समावेश गर्दै, agate, कार्नेलियन वा सार्ड, गोमेद, heliotrope, र बिल्लौर.
हकको आँखाको पत्थर अर्थ र उपचार गुणहरू लाभ
मनमोहक गाँठको रूपमा, यो ढु stone्गालाई जादुई रत्नको रूपमा मान्यता दिइन्छ जसले जीवनको धम्कीबाट जोगिन धडको चारैतिर एक सुरक्षा स्क्रीन बनाउँछ। आत्मालाई बढावा दिन मान्यता प्राप्त, यसले जीवनको वास्तविकता हेर्न विचारहरूमा ज्ञान र स्पष्टता ल्याउँछ।
हकको आँखा, दक्षिण अफ्रिका बाट
माइक्रोस्कोप मुनि हकको आँखा
के बाजको आँखा खतरनाक छ?
यसको च्याटोआइन्सको कारण एस्बेस्टोस फाइबर इम्बेडेड फाइबर, साथै एक्टिनोलाइट फाइबर पनि हुन सक्छ। एस्बेस्टोस एक प्रसिद्ध उपयोगी तर खतरनाक सामग्री हो र यसले फोक्सोको क्यान्सर निम्त्याउँछ, तर यसको खतरनाक फाइबरहरू निलो हज र आँखामा राम्रोसँग सम्मिलित छन् र यसको मालिकलाई कुनै खतरा छैन।
के निलो टाइगर आँखा प्राकृतिक छ?
हो यो छ। रत्न क्वार्ट्ज परिवारको एक विशेष अंश हो। रातो बाघको आँखा जस्तो छैन, जुन वास्तवमा तातो उपचार गर्ने सुनको बाघको आँखाको उत्पादन हो, बाघको आँखाको नीलो र a्ग एक प्राकृतिक घटना हो।
हाम्रो रत्न रत्न पसलमा प्राकृतिक बाजको आँखा किन्नुहोस्
सगाई रिंगहरू, नेकलेसहरू, स्टड इयररिंगहरू, ब्रेसलेटहरू, पेंडन्ट्सको रूपमा हामी अनुकूलन बनाएको हजको आँखा ढु stone्गाको गहनाहरू बनाउँदछौं ... कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस उद्धरण को लागी।